Enwe owu ọmụma-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Enwe owu ọmụma
Oge: 2020-08-27 Hits: 34
Ndị mmadụ nwere ikike na ahụmihe, mara ka ị ga-esi nwee “owu ọmụma”
Ha na-achọ ịnọ jụụ, ịtụgharị uche na onwe ha naanị, ịghọta ndụ, ịghọta ezi ihe ndụ pụtara! Mgbe ndị mmadụ dị ndụ, ha na-enwe ihe mgbu n'ihi na a na-atụdo ha ma na-enweghị ike iwepụ obi ha. Ya mere, otutu oge, anyi aghaghi imuputa iwepu obi anyi, ighota onwe anyi n'ime ime, ka anyi wee ghota onwe anyi ma mechapu nwere onwe anyi.
Ọtụtụ ndị na-atụ ụjọ nke owu ọmụma, ha enweghị ike ịnụ ụtọ owu ọmụma, nke ahụ na-aghọ ụdị nhụjuanya. Ndị nwere ikike nwere ike ịghọta na ndụ chọrọ ka anyị gaa na mmetụta, ahụmịhe, ị ga-atachi obi na owu ọmụma, ị ga-amụta ịnụ ụtọ owu ọmụma!
Iswa na-eme oké mkpọtụ. Naanị mgbe owu na-ama gị, ị nwere ike ịchọpụta onwe gị. Naanị mgbe ọ dị gị ka owu na-ama gị, ị ga - enwe ike iso gị kparịta ụka nke ọma. Mara ka esi anụ ịnụ ụma ga-eme ka anyị dị ike, anyị agaghịzikwa atụ ụjọ, anyị agaghịzịkwa echegbu onwe anyị, n'ihi na anyị nwere onye anyị kacha nwee ntụkwasị obi, ọ bụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi!
Na mbido, anyị enweghị aka nka. Anyị na-agbagharị mgbe niile. Site na mbọ nke aka anyị, ịkọ n’ihu oge niile, nghọta oge niile, na ịgan’iru anyị mgbe niile, anyị chịkọtara nka anyị. N'ime usoro a, oge ole owu na-ama, mana kpọmkwem n'ihi "owu ọmụma" ndị a, emepeela oghere ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ onye ruru eru, mgbe ahụ ị ga-amụta ịbụ "onwe gị"!
Previous: Omume dị mma karịa echiche efu
Ọzọ: Jenny 'Ahụmịhe Ahụmịhe